Madaxweynaha Kazakhstan oo 30 sano kadib xilka ka degaya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Madaxweynaha Kazakhstan oo 30 sano kadib xilka ka degaya
March 20, 2019 - By: Abdirizak Shiino
Madaxweyne Nursultan Nazarbayev ayaa habeenimadii Salaasada si kadis ah ugu dhawaaqay inuu xilka isaga degayo, isagoo sheegay in 30ka bishan Maarso uu xukunka ku wareejin doono Guddoomiyaha Aqalka Sare ee dalkaasi.
Go’aanka Nazarbayev ayaa ah mid lama filaan ah maadaama la qorsheenayey inuu ka qeyb qaato doorashada dalkaasi ka dhici doonta sanadka 2020.
Nursultan Nazarbayev ayaa kasoo talinayey dalkaasi tan iyo markii wadankaasi madax banaani ka qaatay Dowladii Sofiyeetka oo ay xubin ka ahaan jireen.
Wuxuu awooda dalkaasi qabtay sanadkii 1989 isagoo xiligaasi ahaa guddoomiyaha xisbigii Shuuciga ee wadankaasi ka talinayey, waxaana Madaxweynihii ugu horeeyey ee dalkaasi loo doortay 1991 asbuucyo kahor intaysan burburin xukuumadii Sofiyeetka.
Faah faahin kama bixin sababta rasmiga ah ee ka danbeysa go’aankiisa balse wuxuu sheegay inuu doonayo in isbedal lagu sameeyo maamulka dalkaasi iyo dhaqaalaha wadankaasi oo sanadihii lasoo dhaafay hoos usii dhacayey, bishii lasoo dhaafay ayuu horey u kala diray xukuumadiisa.
Dhinaca kale Nazarbayev ayaa weli sii ahaan doona guddoomiyaha xisbi xaakimka dalkaasi iyo waliba Guddoomiyaha Golaha Amniga inta uu nool yahay maadaama uu yahay Aabaha Qarankaasi ama ninkii aasaasay Madax banaanida dalkaasi.